QORSHE BOQORTOOYO! Real Madrid Oo Diyaarisay Qorshe Ay Dib Iskugu Dhigayso | Laacibnet.net
QORSHE BOQORTOOYO! Real Madrid Oo Diyaarisay Qorshe Ay Dib Iskugu Dhigayso
Qorshaha muddada dheer ee Real Madrid ayaa ah inay mar kale dib u dhisto boqortooyadii xiddiguhu ka buuxeen ee bilowgii qarnigan 21aad ay ka samaysay Santiago Bernabeu, waxaana sees u noqon doona weeraryahanka Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe, kaas oo ay xagaagan u dhaqaaqi doonto.
Sida uu qoray wargeyska AS ee kasoo baxa waddanka Spain, hawlgalka Mbappe ayay Real Madrid u diyaarisay lacag badan oo waqtigan ay adag tahay bixintiisu, waxaana ay rumaysan tahay in PSG aanay diidi karin sababtoo ah, waxa uu laacibkan heshiiskiisu ku egyahay June 2022, taas oo ku kallifaysa inay haddii sii iibiso si aanu ugaga tegin si bilaash ah.
Real Madrid ayaa u diyaarisay hawlgalka Mbappe €150 milyan oo Euro oo qaddimaad ah, laakiin marka dambe gaadhi doonta illaa €222 milyan oo Gini, taas oo uga dhignaan doonta PSG inay dib usoo ceshan doonto lacag la mid ah middii ay ku bixisay Neymar sannadkii 2017kii ee ay kagala soo wareegtay Barcelona.
Mbappe ayaa waxa isagana ay kooxda reer Spain u ballan-qaaday mushahar lacageed oo sannadkii noqonaya €21 milyan oo Euro.
Paris Saint-Germain ayay dhimasho oo kale ku noqonaysaa inay weydo laacibkeedan 22 jirka ah, laakiin arrinta ku qasbaysa inay iibiso ayaa waxay tahay inay burbureen wada-hadallo ay hore iskugu dayday inay heshiiska ugu kordhiso.
Madaxweynaha Real Madrid ee Florentino Perez iyo tababare Zinedine Zidane ayaa laduba u arka Mbappe inuu yahay ciyaartoy noocii kooxdooda ah, isla markaana guulo badan la gaadhi kara.
Laakiin isaga oo kaliya maaha, waxaanay doonayaan ciyaartooyo kale oo uu ku jiro weeraryahanka Borussia Dortmund ee Erling Haaland.
Ka hor inta aanay u dhaqaaqin saxeexyadan, Real Madrid waxay kooxdeeda ka diri doontaa lix ciyaartoy oo uu ugu horreeyo Gareth Bale oo amaah ugu maqan Tottenham, balse ay bixiso qaybo ka mid ah mushaharkiisa.
Isco oo ay Arsenal doonayso, lana sheegayo in bishan January uu doonayo inuu tago, Luka Jovic, Brahim Diaz iyo Marcelo ayaa iyaguna ku jira liiska xiddigaha laga dirayo Santiago Bernabeyu.
Waxa kale oo ay isaguna ku jira liiska ciyaartoyda ay Real Madrid ka tirtirayso liiska xiddigaha kooxdeeda laacibka amaahda ugu maqan Arsenal ee Dani Ceballos.
Si kastaba, Mbappe ayay Real Madrid doonaysaa inuu kooxdeeda la bilowdo xili ciyaareedka 2021-22.
Man United Mise PSG? Walaalka Sergio Ramos Oo U Sheegay Real Madrid Kooxda Inta Ugu Badan Doonaysay Saxeexa Kabtankeeda
Wakhtiga Saxeexa Ozil Lagu Dhawaaqayo, Real Oo Shuruud Adag Ku Xidhay Ramos, Ruug-Caddaa Man United Ka Baxaya & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa